Ka hortagga cudurada faafa ee neefsashada
waxaa maamula 20-04-02
Maaskaro ilaalintiisu waa mid ka mid ah qodobbada waxtarka leh ee ka hortagga cudurrada faafa ee neef-mareenka, kaasoo door muhiim ah ka ciyaara xakameynta iyo ilaalinta cudurka. Aad ayey muhiim u tahay in la gaadho heerarka tayada ee dadka wax dhaliisha iska leh si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada dadka. Marka waxaa jira ...
Iyada oo horumarka joogtada ah ee xaaladda cudurka faafa, isticmaalka maaskarada ayaa si aad ah kor ugu kacay. Maaskaro kasta oo dheeri ah oo la soo saaro waa ilaalin nabdoon oo dadka iyo shaqaalaha caafimaadka ah. Waaxaha awooda u leh iyo shirkadaha wax soo saarka la xiriira ayaa ku tartamaya waqti. Sida laga soo xigtay ...